အချိန်ဟာ အကောင်းဆုံး ဆေးဆရာတဲ့လား? - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home ဗဟုသုတ အချိန်ဟာ အကောင်းဆုံး ဆေးဆရာတဲ့လား?
Anonymous at 2:00:00 PM ဗဟုသုတ,
လူတိုင်းရဲ့ရင်မှာ အချစ်ခဲ့ရဆုံးသောသူဆိုတာ ရှိခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ ပြန်တွေးလိုက်တိုင်း ပျော်စရာတွေ မျှဝေဖူးတဲ့သူ၊ နာကျင်မှုတွေ ဖြစ်စေခဲ့တဲ့သူ၊ ကိုယ်မှဟုတ်ခဲ့ရဲ့လားလို့ တွေးမိရလောက်အောင် ကိုယ့်ကို ပြုစားခဲ့တဲ့သူ။ ဒီလိုလူတစ်ယောက်ဟာ လူတိုင်းရင်မှာ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။
အချိန်တန်တဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့နံဘေးမှာ ချစ်ရမယ့်သူတစ်ယောက် ရှိကောင်းရှိလာလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် တွေးမိတဲ့အခါတိုင်း စွဲလန်းနေရတဲ့သူ၊ မုန်းတီးနေရတဲ့သူ၊ တမ်းတမိတဲ့သူ။ နာကျင်မှုဝေဒနာတွေ မရှိတော့ရင်တောင် တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါတိုင်း "သူရော ဘာတွေလုပ်နေမလဲ" ဆိုပြီး တွေးမိရလောက်တဲ့သူမျိုးပေါ့။
အချိန်ဟာ အကောင်းဆုံး ဆေးဆရာတဲ့လား? ဟုတ်ကောင်းတော့ ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ အချိန်ကြောင့်ပဲ နာကျင်ခြင်းတွေ သက်သာစေခဲ့တယ်။ ဝမ်းနည်းခြင်းတွေ ပျောက်ကွယ်စေခဲ့တယ်။ မျက်ရည်စတွေလည်း ခမ်းခြောက်လာခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် အချိန်က ပြုံးရယ်နေတဲ့ သူရဲ့ပုံရိပ်လေးကို အတွေးထဲက ထုတ်မပစ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ လျှောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ရပ်ကွက်ထဲက လမ်းသွယ်လေးတွေကို ဖျက်ဆီးမပစ်နိုင်ဘူး။ အတူဖန်တီးခဲ့ဖူးတဲ့ အမှတ်တရတွေကို ဝေဝါးမသွားစေခဲ့ဘူး။ အချိန်ဟာ ဝေဒနာတွေကို ကုသနိုင်မယ့် ဆေးဆရာတဲ့လား? မဟုတ်ဘူး.. အချိန်ဆိုတာ ဝေဒနာတွေကို ထုံထိုင်းသွားစေမယ့် ထုံဆေးသက်သက်ပါပဲ..
(Focus Youth E-magazine )